Archive du 20171014
Vono olona teny Ambohitrarahaba Ankizy 2, lehilahy 1 nidoboka eny Antanimora
Olona 6 no niakatra fampanoavana teny amin’ny lapan’ny fitsarana Anosy omaly momba ilay raharaha fandrobana sy famonoan’olona ary fakana an-keriny teny Ambohitrahaba ka nahafatesana tovolahy kely izay norasarasaina tamin’ny famaky , notapahin-doha avy eo nesorina ny masony.
Claudine Razaimamonjy Tsy navoaka izany izy, hoy ny lehiben’ny fonja
Mbola tazonina ato amin’ny fonjan’i Manjakandriana i Claudine Razaimamonjy fa tsy navoaka velively, ka diso tanteraka ny filazana fa efa navotsotra izy.
Misaona ny firenena Nodimandry ny Pr Zafy Albert
Lavo ny andrarezina ! Nodimandry teo amin’ny faha-90 taonany omaly 13 oktobra antoandro tany amin’ny hopitalin’i Saint Pierre any amin’ny Nosy La Réunion ny filoham-pirenena teo aloha Pr Zafy Albert.
Maka Alphonse –Filohan’ny CFM “Atomboka eny ifotony ny fampihavanana”
Voafidy ho filohan’ny filankevitry ny fampihavanam-pienena (CFM) omaly zoma, nifanandrify indrindra tamin’ny nahalasanan’ny profesora Zafy tompon-kevitra tamin’ny fampihavanam-pirenena i Maka Alphonse, izay mpanao gazety.
Kaominina Antananarivo Notoloran’ny Banky SBM fitaovana
Tonga nanome tolo-tanana , borety miisa 40 mitentina 5 tapitrisa ariary latsaka kely hoan’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra ny orinasa SBM (Banque Madagascar) omaly 13 oktobra 2017 tetsy amin’ny Lapan’ny Tanàna Analakely.
Marc Tatandraza Manadala saim-bahoaka fotsiny
Manadala saim-bahoaka no azo hilazana ny fihetsika sy ny zavatra ataon’i Marc Tatandraza, izay milaza azy ho apostoly sy irak’i Jesosy. Sesilany ny fanambarana sy fitenintenenam-poana etsy sy eroa.
Talen’ny SAMVA vaovao Maika ny fanalana ny fako hamongorana ny pesta
Napetraka tamin’ny toerany omaly ny talen’ny SAMVA vaovao Rakotoarivony William, taorian’ny nanalan’ny fitondram-panjakana an-dRatolojanahary Damy Jean Badpiste, tale jeneralin’ny SAMVA teo aloha. Mazava ny antom-pijoroan’ny tale vaovao, raha araka ny tafa fohy nifanaovany tamin’ny mpanao gazety omaly teny Ampasampito.
Clémence Rahariniriana -FTAR Manjaka tokana, hoy ny filoha lefitra teo aloha
Nanentana ireo mpitatitra fiarakaretsaka rehetra eto Antananarivo tetsy amin’ny Mon gouter Andrefanambohijanahary omaly ny solontenan’ireo mpitondra fiarakaretsaka izay tsy mankasitraka ny fitokonan’ireo mpikambana sasantsasany avy eo anivon’ny fikambanan’ny Taxi eto Antananarivo Renivohitra
Fanakatonana an’Andranomanelatra Hitory ny fanjakana ny Tiko AAA
Nafampana ny toe-draharaha tany amin’ny Tiko Andranomanelatra omaly. Tonga vao maraina nitaky ny fanokafana ny orinasa Tiko AAA ireo mpiasa sy ny tantsaha mivelona amin’ny alalan’ity orinasa ity.
Faritra misy pesta Tsy mbola mianatra herinandro indray ny mpianatra
Tsy mbola feno ny fepetra hahafahana mampiditra ny ankizy eny an-tsekoly manoloana ny valanaretina pesta eto amin’ny firenena, hoy ny fanambarana ofisialy nataoan’ny minisiteran’ny fanabeazam-pirenena omaly zoma.